Vaovao - Soloy ny "singa sivana" an'ny mpanadio rano ao an-tranonao. Aza adino ny miverina misotro "rano madio"!
Ankehitriny dia mihatsara hatrany ny fari-piainan'ny olona, ​​ary nanomboka nitady ny kalitaon'ny fiainana izy ireo. Na inona na inona fihinanana, fisotroanao na ampiasanao eo amin'ny fiainana dia mila salama ianao ary raha ilaina dia mampiasa milina vitsivitsy ianao hanampiana anao hahafahanao mahazo antoka fa salama sy salama ny zavatra ilaina isan'andro.
Ny rano dia zavatra tena ilaina amin'ny fiainantsika, ary ankehitriny dia mihamaro ny olona manomboka mihaino ny fiarovana ny fampiasana rano. Amin'ny ankapobeny, ny rano ao an-tranontsika dia entin'ny zavamaniry rano amin'ny alàlan'ny fantsona. Ity karazan-drano ity dia misy otrikaretina sy voadio, fa ny etona na akora sasany mandoto no hijanona ao anaty rano, ary hisy harafesina ao amin'ny fantson-drano. Mandatsaka, ary amin'izany hiditra amin'ny fiainantsika manaraka ny fantson-drano sy ny fikorianan'ny rano.
Noho ireo antony ireo ihany koa ny ankohonana maro izao no mametraka mpanadio rano hanadio ny loharanon'ny rano. Satria ny singa mpanadio rano dia misy singa sivana, dia afaka mandray ny ankamaroan'ny fahalotoana sy bakteria ao anaty rano fantsakana izy io, mba ho azo antoka sy madio kokoa ho an'ny fisotroana na fandrahoana sakafo ny loharanon-drano karakarain'ilay mpanadio rano. Na izany aza, satria ny singa sivana dia ampiasaina amin'ny filtration, ny singa sivana koa dia mila soloina. Impiry no tokony hosoloina?
Amin'izao fotoana izao dia tsy mitovy ny karazana fanadiovan-drano eny an-tsena, ary hafa ihany koa ny fampiasana voajanahary amin'ireo singa sivana, ary ny vidin'ny karazana fanovana sivana tsirairay avy dia hafa ihany koa. Huahua androany dia milaza aminao ny fomba matetika hanoloana ireo karazana sivana telo karazana eny an-tsena. fahasalamana!
1. Sivana karbaona mandeha
Fantatsika rehetra fa ny karbaona ampandehanana dia akora misy adsorption mahery, ka mpanamboatra fanadiovan-drano maro no mampiasa azy io ho fitaovana lehibe amin'ny sivana manadio rano. Amin'ny ankapobeny, rehefa ampiasaina ho toy ny singa sivana ny karbaona ampandehanana dia tsy maintsy zaraina ho karbaona nialoha ny fampidinana azy ary karbaona aorian'ny fampidirana azy, mba hahafahan'ny ambaratonga roa hiara-hitroka fofona mahery sy klôro amin'ny loharanon'ny rano. Na izany aza, ny karbaona ampandehanana dia ho tototry ihany koa aorian'ny fampiasana maharitra, ary matetika dia mila soloina isaky ny enim-bolana ka hatramin'ny iray taona.
Ny landihazo PP dia karazan-javatra manivana sombintsombiny lehibe anaty rano, toy ny karazana fahalotoana sedimentana sy metaly afaka miankina aminy hikatona ivelan'ny varavarana. Mitovy amin'ny gazy izy, nofonosina manodidina ny fantsona hanampiana hanivana ny fako, satria somary lehibe ireo zavatra novainy, noho izany dia ho fohy kokoa noho ny rano ho avy ny serivisy, eo amin'ny 4 volana eo ho eo no hanatanterahana soloina.
3. membrane Ultrafiltration
Rehefa maheno ny anaran'ny membrane ultrafiltration ianao dia tokony ho fantatrao fa ny habetsaky ny sivan'io dia mazàna dia kely. Aorian'ny fanivanana azy dia azo ovaina tanteraka ho rano madio ny rano fantsakana. Noho ny kalitaon'ny sivana ambany, ny fotoana fanoloana dia ho lava kokoa, matetika indray mandeha isaky ny 2 taona.
Rehefa ampiasaina ny fanadiovan-drano dia ny manisa ny singa sivana no zava-dehibe indrindra ka mila manolo sy manadio azy ara-potoana isika, mba hahazoana misotro rano madio isaky ny mandeha!